I-Semalt: Indlela & Kungani Udinga Ukuvimbela Ikheli Lakho le-IP Ku-Google Analytics
Kungenzeka ukwamukela amakhulu noma ngisho nezinkulungwane zokubukwa kokuthunyelwe kwebhulogi kodwa okwamanje uhluleka ukuthola oxhumana nabo noma amazwana ngokufanayo. Iwebhusayithi ingabonisa ukuthi ibhekwe ngabaningi bebukeli, kodwa impendulo ngokwemibono kanye nabathintana nabo kubonisa okunye. Lokhu kwenzeka ku-akhawunti ye-Google Analytics. Idatha ekhombisa impendulo yombukeli yaziwa njengedatha yokubika - vps hosting usa cheapest. Idatha yokubika ingase ingalungile uma ikheli le-IP ku-Akhawunti ye-Google Analytics ingavinjelwe.
Ukuze uthole idatha yokubika enembile, kubalulekile ukuthi ikheli le-IP elisetshenziswe nsuku zonke kwiwebhusayithi kufanele livinjelwe. Kuhle ukuthi iwebhusayithi ithole impela imibono eminingi. Umuntu angalingeka ukuba acabange ukuthi uma iwebhusayithi ibonisa ukuthi ithola ukubukwa okumbalwa, isesikhundleni sokuthola imali engaphezulu kwemali evela ezikhangisweni. Ngokuphambene nalokho, lokhu akunjalo ngoba idatha yokubika ayinembile uma ikheli le-IP laleyo website engabonakali iqiniso. Ngakho-ke, ukusebenzisa le datha ukukholisa umkhangisi ongase akhohlise. Kungcono ukuthola inombolo encane yababukeli bewebusayithi abanamanani anokwethenjelwa njengokwazi ukuthi benzani uma bevakashela leyo website kunokuthola isigaba sababukeli abanhloso yabo engacacisiwe ngokucacile.
Kungenzeka ukuvimbela ikheli le-IP uma ngabe le nqubo elula, echazwe nguRyan Johnson, iMenenja Yokuthengisa Ephezulu Semalt , ilandelwa.
Isinyathelo 1: Ukukhomba ikheli le-IP
Iningi labantu lichitha amahora amaningi kuma-computer abo futhi abanalo ulwazi mayelana nekheli labo le-IP. Ukuze uthole ikheli le-IP, omunye udinga nje i-Google "iyini ikheli lami le-IP?" kusukela emiphumeleni, inombolo ezobonisa ngaphezulu kwekhasi ikheli le-IP. Kubalulekile ukubamba ngekhanda le nombolo uma kungenjalo, kungabhalwa phansi ukuze kubhekiswe esikhathini esizayo.
Isinyathelo 2: Ukungena ngemvume
Isinyathelo esilandelayo ukungena ngemvume ku-Akhawunti ye-Google Analytics ofuna ukuvimbela ikheli le-IP.
Isinyathelo 3: Ukukhetha i-akhawunti
Ngemuva kokungena ngemvume ku-Akhawunti ye-Google Analytics, into elandelayo ukukhetha i-akhawunti oyifisa ukuyivimba ikheli le-IP.
Isinyathelo 4: Ukukhetha isixhumanisi somqondisi
Ngemuva kokuba i-akhawunti ikhethiwe, udinga ukuthutha ekhoneni eliphezulu elingakwesokudla kwesikrini bese uchofoze ku-link ye-Admin.
Isinyathelo 5: Ukukhethwa kwezihlungi
Uma isixhumanisi seMilayezo sesivuliwe, inketho ethi "Zonke Izihlungi" kufanele ikhethwe kusigaba se-akhawunti.
Isinyathelo 6: Khetha isihlungi esisha
Isinyathelo esilandelayo ukuchofoza ku-New Filter. Kumkhakha wegama, umuntu angakhetha noma yiliphi igama elifunayo ikheli le-IP. Isihlungi esivele sichaziwe futhi inketho ethi "Hlanganisa" kufanele ihlale ihloliwe. Ukuhlehla kokubili kufanele kushintshwe futhi kubhalwe ngokuthi "ithrafikhi ephuma ekhelini le-IP", futhi ukwehla kwesithathu kwesokunxele kushiywanga. Ikheli le-IP kusuka kusesho lwe-Google kufanele lifakwe ohlwini olulandelwe ngokulandela iphrofayli etholakalayo bese uyengeza. Isinyathelo sokugcina siyisindisa.
Uma usindisiwe, ikheli le-IP livinjelwe ngempumelelo ekubikweni.